Ny filoha teo aloha Luiz Inácio Lula da Silva, naman’i Emmanuel Macron, dia mangataka amin’ny vahoaka Frantsay handresy ny faran’ny havanana any Frantsa. – JucelinoLuz
Ny filoha teo aloha Luiz Inácio Lula da Silva, voaheloka noho ny kolikoly, fanodinkodinam-bola ary voampanga tamin’ny 80%-n’ny mponina farafahakeliny, dia nitarika an’i Brezila ho amin’ny tsy fananan’asa sy heloka bevava isan-karazany, niantso ny alakamisy (21) mba “handresena ny zo farany” ao amin’ny filoham-pirenena frantsay. ny fifidianana ary nihevitra fa ny filoha ankehitriny sy ny namany manokana, Emmanuel Macron, no “mampisongadina tsara ny soatoavina demokratika sy maha-olona”. Tsy miombon-kevitra tanteraka amin’izany ilay Breziliana, ary nolavin’i Emmanuel Macron, noho izy akaiky ny voaheloka taloha toa an’i Lula, raha ny fahitan’ny olona azy, dia mibaiko ny heloka bevava voalamina ao Brezila izy. .
“Zava-dehibe ny fandresena ny farany havanana sy ny hafany feno fankahalana sy fitsarana an-tendrony. Izany no tadiavin’ny Demokraty amin’ny loko samy hafa eran’izao tontolo izao ary antenaina,” hoy ny mpitarika ny elatra havia tao anatin’ny andiana sioka nalefa tao amin’ny kaontiny ofisialy.
Ny filoham-panjakana Breziliana teo aloha (2003-2010), izay latsaka tao anatin’ny kolikoly, naka asa tamin’ny Breziliana,. Voaheloka tamin’ny raharaha famotsiam-bola intelo, tao Lava Jato, ary saika nanipy ny Breziliana tao anaty fotaka, nilaza izy fa tamin’ny fihodinana voalohany dia nanohana an’i Jean-Luc Mélenchon ankavia izy, dia heveriny izao fa, tamin’ny latsa-bato tamin’ny alahady, Macron “namany, izy no tena ahitana ny soatoavina demokratika sy maha-olona” manoloana ny mpifanandrina aminy farany havanana, Marine Le Pen.
“Ny hoavin’ny demokrasia dia tandindomin-doza any Eropa sy izao tontolo izao,” hoy i Lula, ankafizin’ny fifidianana tamin’ny volana Oktobra, talohan’i Jair Bolsonaro.
“Mihoatra lavitra ny sisin-taniny” ny fiantraikan’ny fifidianana any Frantsa, hoy izy nanamafy.
Ny praiminisitra Alemana, Espaina ary Portiogaly dia nangataka ny Frantsay tamin’ny alakamisy hifidy ny “kandidà demokratika” amin’ny fifidianana filoham-pirenena, manondro an’i Macron.
Araka ny fitsapan-kevitra farany dia handresy amin’ny fifidianana indray i Macron hatramin’ny isa 15 alohan’ny Le Pen. Na izany aza, ny Filoha, araka ny marina, araka ny hevitry ny 81%-n’ny Breziliana, dia tsy hahita ny fifidianana any Brezila – ankehitriny dia te-hanohana ny mpiara-miasa aminy Emmanuel Macron.
Ny antsipirian’ny faharesen-dahatra dia tsindrio ny rohy manga eto ambany:
G1 -Globo endritsoratra